Imibuzo evame ukubuzwa - Jinhua Panda Outdoor Sports Co., Ltd.
Ibhodi inezinto eziningi ezahlukahlukene, futhi ibhodi linobukhulu obuningi, intengo yehlukile, pls ngithumele uphenyo lwakho, ngingaphendula kungakapheli amahora angu-24
Yebo, wonke amabhodi anenani eliphansi le-oda, ubuningi be-SUP ubuncane be-oda ngama-30pcs, ibhodi le-inflatable ubuncane be-oda elingu-50pcs, uma ufuna ezimbalwa, ama-pls angithumele uphenyo, ngizokuphendula nawe.
Ngokuya ngobuningi bebhodi, kwesinye isikhathi ukukhiqiza isikhathi kuyizinsuku ezingama-20-45, kepha uMashi- Agasti umatasa ngenkathi yokukhiqiza nokuthumela amabhodi, isikhathi sokulethwa sizoba side, kepha singazama konke okusemandleni ethu ukuthumela, uma unezidingo ezikhethekile, wena ungangitshela
I-TT (30% idiphozi engu-70% yokukhokha ngaphambi kokuthunyelwa)
Siqinisekisa izinto zethu nokusebenza. Ukuzibophezela kwethu kukwaneliseka ngemikhiqizo yethu. Ngaphambi kokupakisha, sinothisha abaqeqeshiwe ukuhlola zonke izingcezu zebhodi ngokucophelela, qiniseka ukuthi ibhodi alinankinga nokupakisha.
Yebo, sihlala sisebenzisa ukupakisha ukuthekelisa kwekhwalithi ephezulu.Njengekhanda lebhodi, ibhodi phansi nomsila webhodi sizosebenzisa ukotini wamaparele nephepha lekhadi ukuvikela, ukuze sigweme ibhodi elonakele ekuthumeleni.
Kuthiwani ngemali ekhokhwayo yokuklama?
Sinomklami ophezulu e-China, angakunika ukwakheka kwebhodi lamahhala, uma une-design board yakho, ama-pls angithumela ukwakhiwa kwebhodi ngefayela le-PDF noma le-AI, singakwenzela umklamo.